Nagu saabsan | Mashiinada dhismaha mashiinada beeraha ee Coyu, Ltd.
mon - fri: 10 subaxnimo - 7-da fiidnimofadhiyey - qorrax: 10 subaxnimo - 3 galabnimo
Mashiinka Dhismooyinka Beeraha ee Caymiska ee Degmada Changyuan waa shirkad isku dhafan R&D, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga gawaarida matoorka ee la taaban karo. Shirkadda waxay ku taalaa beerta warshadaha gawaarida ee gobolka Changyuan, "magaaladii ay ku taal warshadaha dhifashada ee Shiinaha", oo ay ku taal Daguang Expressway oo ku taal Galbeedka iyo 308 waddo weyn oo ku taal koonfurta.
Shirkadda ayaa leh hanti go'an oo dhan 60 milyan, waxay dabooshaa aag dhan 240 muun, dhisme dhul ah 40000 mitir oo laba jibaaran, waxay leedahay warshad heerkeedu sarreeyo, qadka soosaarka matoorka yar ee dhexdhexaadka ah, oo leh sanadle ah wax soo saar 300 oo yaryar oo dhexdhexaad ah. matoorka gawaarida.
Gawaarida yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee ay soo saartaan shirkaduhu waxay heleen teknolojiyad badan oo madaxbannaan. Buundada kaliya 37m 5-QAYBB gawaarida waaweyn ee gawaarida xamuulka qaada oo ay soo saartay shirkadda ayaa si fiican u aqbalaya inta badan isticmaaleyaasha. Sannadkii 2017-kii, 37-kii gaari xamuul ee la taaban karo ee buundada kaliya ayaa ku guuleysatay "BICES China International injineernimada Mashiinka Suuq-geynta Alaabada".
Shirkadda waxay waligeed u hoggaansanaaneysaa falsafadda ganacsiga ee "isu soo ururinta dadka si sharaf leh oo suuqa ugu guuleysta tayo", macaamiishana ay si wadajir ah u ammaaneen.
Alaabada ugu Weyn
Waxyaabaha ugu waa weyn ee shirkadda waa 30 mitir oo isku dhafan gawaarida matoorka isku dhafan, 33 mitir oo isku dhafan gawaarida bamka isku dhafan, 38 mitir oo isku dhafan gawaarida isku dhafan, 33 mitir, 37 mitir, 38 mitir, 42 mitir, 47 mitir, 50 mitir, gawaarida matoorka 58 mitir. Sannado badan oo horumarin ah ka dib, alaabada shirkadda waxay sii wadaysaa casriyeyn.
Dadku waxay u baahan yihiin inay neefsadaan hawo si ay u sii noolaadaan. Qof weyn ayaa neefsanaya 20000 jeer maalintii wuxuuna neefsanayaa 15-20 mitir cubic hawada.
Sidaa darteed, hawada wasakhaysan waxay saameyn toos ah ku leedahay caafimaadka aadanaha
Hawlaha bini aadamka waxay sababi doonaan in tiro badan oo warshadaha, beeraha iyo qashinka gudaha ah lagu shubo biyaha, taas oo keenaysa wasakhaynta biyaha. Waqtigan xaadirka ah, adduunka waxaa jira in ka badan 420 bilyan mitir cubic oo bullaacad bulaacadeed sannad kasta adduunka
Biyaha lagu daadiyay wabiyada, harooyinka iyo badaha ayaa wasakheeyay 5.5 tiriliyan mitir cubic oo biyo nadiif ah, oo u dhiganta in kabadan 14% wadarta guud ee biyaha aduunka.
Mashiinka Dhismooyinka Beeraha ee Caymiska ee Degmada Changyuan waa shirkad isku dhafan R&D, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga gawaarida matoorka ee la taaban karo.
Gawaarida matoorka ee 58 mitir
50 mitir bambo gacmeed
Gaari 47meter ah
Gawaarida qaada 42 mitir
38 mitir oo laba jibaaran buundada buundada
38 mitir taraafikada la taaban karo
37 mitir bir-buundo kaliya ah
33 mitir bam-gacmeed
33 mitir isku-dhafka gawaarida matoorka
Cinwaanka: Beerta Warshadaha Gawaarida, Degmada Changyuan, Gobolka Henan
mon - fri: 10 subaxnimo - 7-da fiidnimo